HERO OF MYANMAR: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တပ်မတော်သားတစ်ဦး၏ ရိုးရှင်းပွင့်လင်းသောအမြင် ( အပိုင်း - ၂ )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တပ်မတော်သားတစ်ဦး၏ ရိုးရှင်းပွင့်လင်းသောအမြင် ( အပိုင်း - ၂ )
[11:37 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
`` တပ်မတော်သည် အမျိုးသားရေးကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက် ´´ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ဟာ နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက် လာရင် တပ်မတော်ရဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ မူဝါဒတစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်။ မျက်မှန်စိမ်း အတပ်ခံ ထားရသူတွေ နားလည်အောင် ထပ်မံ ရှင်းပြရရင် တပ်မတော်က ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အမျိုးသားရေး ဆိုတာ နိုင်ငံတော်အတွက် ထာဝရ မှန်ကန်နေမည့် မူဝါဒများဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်မှုမပြိုကွဲ ရေး၊ အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေး ဆိုတဲ့ ဒို့တာဝန် အရေး(၃)ပါးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားရေး မူဝါဒအပေါ် အခြေခံပြီး နိုင်ငံတော် ရဲ့ အမျိုးသား ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့..
- အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် နယ်စပ်ဒေသမကျန် တစ်နိုင်ငံလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
- စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာရေး
- နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး ၏ အကျိုး စီးပွားကို ဖော်ဆောင် ကာ အေးချမ်း သာယာပြီး ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် သည့် နိုင်ငံတော်သစ် တစ်ရပ် တည်ဆောက်ရေး တို့ကို တပ်မတော်က တာဝန် သိသိသစ္စာရှိရှိ အကာင်အထည်ဖော်လျက် ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အတွက် ထာဝရ မှန်ကန်နေတဲ့ တို့တာဝန် အရေး(၃)ပါးကို တပ်မတော်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖေ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) မရှိတော့တဲ့ အချိန်ကစပြီး တစိုက်စိုက်မတ်မတ် တာဝန်ယူခဲ့တယ် ဆိုတာ သိနားလည် စေချင်ပါတယ်။ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာဟာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းတို့ ခေတ်ကလို စစ်အင်အား အသုံးပြုပြီး တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခံရမှ ဆုံးရှုံးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခေတ်သစ် နယ်ချဲ့ ၀ါဒီတွေဟာ သူတို့ လိုလားတဲ့သူ၊ သူတို့ ကြိုးကိုင်လို့ ရတဲ့ သူကိုတင်ပြီး သြဇာခံနိုင်ငံ အဖြစ် သွပ်သွင်းလေ့ ရှိတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံတကာဖြစ်စဉ်များ အရ လွယ်ကူစွာ ပဲလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ပထ၀ီနိုင်ငံရေး(Geopolitics)အရ အချက် အချာကျပြီး ရုပ်ဝထ္ထု အင်အား နည်းတဲ့အတွက် ပိုပြီး သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် အခြေခံမကောင်းရင် ဇာတိဂုဏ်၊ အမျိုးဂုဏ် ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းရင် အလွယ် တကူပဲ အချုပ်အခြာ အာဏာ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အရ ပါလီမာန် ဒီမိုကရေစီခေတ်၊ တစ်ပါတီ မဆလခေတ်၊ စစ်အစိုးရခေတ် ဘယ်ခေတ်မှာ ဘယ်သူဘဲ အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ် လွတ်လပ်ရေးနှင့် အတူဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှု ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာ အာဏာ မဆုံးရှုံးရေးအတွက် အသက်သွေးချွေး ပေးဆပ်စွန့်လွှတ်နိုင်သူ များဟာ တပ်မတော် သားများ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ လက်ခံ ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်သားဖြစ်လို့ တပ်မတော်ရဲ့ အရေးပါမှုကို ပုံကြီးချဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ မသိသေးသူတွေသိအောင် အကျဉ်းချုပ် ထောက်ပြရရင်-
- ၁၉၄၈ - ၁၉၄၉ ခုနှစ်များမှာ တိုင်းပြည်ကနုနု မုန်တိုင်းကထန်နေတဲ့ ပြည်တွင်း သောင်းကျန်းမှု များ နိုင်ငံ အနှံအပြား ထကြွနေတဲ့ အချိန်ကာလ။
- ၁၉၅၈ - ၁၉၅၉ အာဏာရ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်အတွင်း အစိတ်အစိတ် အမြွှာမြွှာကွဲကြပြီး အာဏာလု၊ လက်နက်စုကြဖြင့် တိုင်းပြည် ပြိုကွဲတော့မယ့် အန္တရာယ်ကာလ။
- ၁၉၆၂ ခုနှစ်က ရှမ်းပြည်နယ် ဖက်ဒရယ်မူ လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ပြီး ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲလု ဆဲဆဲ အချိန်။
- ၁၉၈၈ ခုနှစ် တိုင်းဆူပြည်ဖျက် ဆူပူမှုဖြင့် မင်းမဲ့စရိုက် ကြီးစိုးပြီး ပြည်ပ အင်အားကြီး နိုင်ငံတစ်ခုမှ ရေတပ် စစ်သင်္ဘော(၅)စင်း မြန်မာ ရေပိုင်နက် အတွင်း ကျူးကျော် ရောက်ရှိလာတဲ့ အထိ အချုပ်အခြာ အာဏာ လက်လွတ် ဆုံးရှုံးလု ဆဲဆဲကာလ။
အဲဒီလို တိုင်းပြည် ချောက်ကမ်း ပါးထိပ် ရောက်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်ကာလ တွေမှာ အမျိုးသားရေး တာဝန် ကို သစ္စာမဖောက်တဲ့ တပ်မတော်က နိုင်ငံတော် ရဲ့ အချုပ် အခြာ အာဏာနဲ့ ပြည်သူ များရဲ့အသက် အိုးအိမ်စည်း စိမ်တွေကို ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ပေးခဲ့ တာကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နားလည် လက်ခံ သင့်ပါတယ်။
တစ်နည်း အားဖြင့် ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပြောရရင် စစ်တပ် အာဏာသိမ်းတာ၊ ယဉ်ယဉ် ကျေးကျေး ပြောရရင် တပ်မတော်က နိုင်ငံ့အာဏာကို မလွှဲမရှောင်သာလို့ လွှဲပြောင်း ရယူ လိုက်ရတာ လုပ်သင့်လို့ လုပ်ရတာ ဖြစ်ပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ယူဆ ထားသလို ပြည်သူတွေ အပေါ်ကို စိုးမိုးချင်တဲ့ ဆန္ဒ ကြောင့် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတော့ သိပ် သေချာ ပါတယ်။ နိုင်ငံ တာဝန်ယူခဲ့စဉ် တပ်မတော်က လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတွေ ပြန်ရှင်းပြရင် စာ သိပ်ရှည်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး အနောက်မီဒီယာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ၀ါဒဖြန့်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲကြအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း ဘေးက ပွဲကြည့်သူ တွေရဲ့ အမြင်များကို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်ပြီး တပ်မတော်ရဲ့ စွမ်းဆောင် ချက်၊ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု တွေကို သိရှိ နားလည် သင့်ပါတယ်။ ဒီလို တပ်မတော်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် တွေအရ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အကျိုး ရလဒ်တွေကြောင့် ဒီနေ့ အများပြည်သူ လိုလား ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်း ပေါ်မှာ ရောက်ရှိ နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကျ နေပြီလို့ စွပ်စွဲသူတွေ ရှိသလို ခပ်မြန်မြန် သွားရမယ်လို ဆန္ဒ ဇောတွေနဲ့ ပြောသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
ဒီလို ပြောဆိုချက်တွေ ထဲက မြန်မာရုပ်သံက လွှင့်သွားတဲ့ ပါတီမူဝါ ဒဟောပြော တင်ပြခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ရဲ့ ပြောဆို ချက်တွေဟာ ရှေ့နောက် မညီတဲ့ ပြောဆို ချက်တွေကို တပ်မတော်သားတွေ သတိပြုမိပါတယ်။
`` မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ စစ်တပ် နဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံ အသီးသီး ရဲ့ စစ်တပ် များဟာ နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး အတွက် အဓိက အင်အားစု ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို အငြင်းပွား ဖို့မရှိပါဘူး။ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး အတွေ့ အကြုံနဲ့ တွေ့ကြုံ ခဲ့ ရတဲ့ဖြစ်စဉ် များအရ လက်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံ ကို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက် ကြရာမှာ တပ်မတော် ဟာ မပါမဖြစ် ပါရန် လိုအပ်တယ် လို့ ကျွန်မ ယုံကြည် ပါတယ် ´´ ဆိုတဲ့ ပြောစကား အရ နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး မှာ စစ်တပ် က အဓိက အင်အားစု ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ယုံကြည် လက်ခံတယ် လို့ ယူဆ ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တပ်မတော်က နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး အတွက် ဘယ်လိုတွေ လုပ်နေရ သလဲဆိုတာ သိပါသလား? အထက်မှာရှင်ပြခဲ့တဲ့ အတိုင်း စစ်အင်အားနဲ့ ကျူးကျော် လာသူကို စစ်အင်အားနဲ့ ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်မှ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလားတူပဲ ခေတ်သစ် ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ တွေ ကလည်း နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာကို သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ စစ်အင်အား တစ်ခုတည်းကိုသာ အသုံးပြုပြီး တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်တဲ့ ခေတ် မဟုတ်တော့ ပါဘူး။ မျက်မှောက် ကာလ ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့တွေ အသုံးပြုတဲ့ ဘက်စုံ စစ်ပွဲအသွင် (Multi-Dimensional Warfar)မှာ ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေးနည်း(Political Means)၊ စီးပွားရေး နည်းလမ်း (Economic Means)၊ လူမှုရေး နည်းလမ်း(Social Means)၊ သဘောတရားရေး နည်းလမ်း(Ideolo- gical Means)၊ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး နည်းလမ်း (Propaganda Means)၊ စစ်ရေး နည်းလမ်း(Military Means)၊ သံတမန် နည်း (Diplomatic Means) တွေကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စိန်ခေါ်မှု များကို တပ်မတော် အနေနဲ့ မားမား မတ်မတ် ရင်ဆိုင်ဖြေ ရှင်းနိုင်စွမ်း ရှိတယ်ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် လည်း သိနားလည်မယ် ထင်ပါတယ်။
ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြော ရရင် ခေတ်သစ် ကိုလိုနီ ဆိုလို့ အမေရိကန် ကြီးကို ရည်ညွှန်း တယ်လို့ မထင် စေချင် ပါဘူး။ ဘက်စုံ စစ်ပွဲ အသွင်နဲ့ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာ ကို ဆုံးရှုံးအောင် လုပ်လာမဲ့ မည်သည့်နိုင်ငံ ကိုမဆို ရည်ညွန်း ခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်မှာ အမြဲတမ်း မိတ်ဆွေ၊ အမြဲတမ်း ရန်သူ ဆိုတာ မရှိပဲ အမြဲတမ်း အကျိုးစီးပွား သာရှိတဲ့ အတွက် နိုင်ငံ တိုင်းဟာ မိမိရဲ့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား နဲ့ယှဉ်ပြီး အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး မူဝါဒ ချမှတ်လေ့ ရှိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံတော်ရဲ့ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး မူဝါဒအရ တပ်မတော် ဟာ နိုင်ငံ့ ကာကွယ်ရေး တာဝန် ထမ်းဆောင် ရာမှာ ပြည်တွင်း သောင်းကျန်းမှု နှိမ်နင်းရေး ကိုသာမက ပြည်ပ အန္တရာယ် ကိုပါ ရင်ဆိုင် တုန့်ပြန်နိုင် စွမ်း ရှိတဲ့ ခေတ်မီ တပ်မတော် တစ်ရပ် ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ခေတ်မီ တပ်မတော် ဖြစ်မှလည်း နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းတွေ မှာ စွမ်းစွမ်း တမံ ဆောင်ရွက် နိုင်ဖို့ အစဉ် အမြဲ အဆင် သင့် ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံတွေ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ် များ အရ လက်ရှိမြန်မာ နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးမှာ တပ်မတော် မပါ မဖြစ် ပါရန် ယုံကြည် တယ် လို့ပြောခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ကို ညှင်သာစွာ ကူးပြောင်း ပေးခဲ့တဲ့ တပ်မတော် ကို ဒီမိုကရေ စီဘက်မှာ ရပ်တည်ပါ ပြောစရာ မလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ပိုပြီး ဆိုး တာက နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် ဒီမိုကရေစီ စနစ်အရ လွတ်လပ်စွာ တင်ပြခွင့်ရှိတဲ့ လွှတ်တော် (ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်) မှာ တပ်မတော် သားတွေ ပါဝင်နေမှုကို ဖယ်ရှားဖို့ ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း ပြောဆို မှုပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
နိုင်ငံတကာက ထောက်ပံ့မှု အပြည့်အ၀ ရရှိထားပြီး အောက်စဖို့စ် တက္ကသိုလ်ထွက် ပညာတတ်ကြီး တစ်ယောက်က ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ ရွေးကောက်ခံ မဟုတ်တဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ % ပါဝင်နေတာ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းနဲ့ မကိုက်ညီလို့ ပြင်ဆင် ရမယ်ဆိုပြီး တပ်မတော်ကို Political Chellanges လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
- ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သတ်မှတ် ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းဆိုတာ ဘာလဲ ?
- မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဆောင်ရွက် ရာမှာ တပ်မတော်ကို ဘယ်နေရာမှာ အသုံးချချင်တာလဲ ?
- နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အဓိက အင်အားစုဖြစ်တဲ့ တပ်မတော်က ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်မှာ အကြံပြုခွင့် တင်ပြခွင့် ရှိနေ တာဟာ လွှတ်တော် အတွင်း လုပ်ချင်တာ လုပ်လိုတဲ့ ပါတီနို င်ငံရေးသမားများအတွက် (လွှတ်တော် အမတ်များ အားလုံး ကိုမဆိုလိုပါ) အနှာင့် အယှက် အဟန့် အတား ဖြစ်နေပါသလား ?
- ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ် အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ အများ အပြားမှာ ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ အနှစ် သာရဆိုတာ ဘယ်သူက သတ်မှတ် ထားပါသလဲ ?
ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရ ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ အဓိပ္ပါယ် အရတော့ ကောင်းပေမဲ့ နိုင်ငံတိုင်း အတွက်တော့ တသက်မက်တည်း မရှိဘူးဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သိမှာပါ။ တနည်း အားဖြင့် တစ်နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအနှစ် သာရနဲ့ အခြားနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အနှစ်သာရဟာ မတူညီနိုင် ပါဘူး။ ဒီမို ကရေစီ ရဲ့အနှစ် သာရဟာ ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ် များကသာ အုပ်စိုးခြင်းဖြစ် တယ်လို့ ပုံသေကားကျ သတ်မှတ် မယ်ဆိုရင် အုပ်စိုးသူ ကိုယ်စားလှယ် များထဲမှာ ရွေးကောက်ခံခြင်း မပြုတဲ့သူများ ပါလာရင် ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အနှစ်သာရ၊ ဒီမိုကရေစီ မူတွေနဲ့ မကိုက်ညီပဲ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံလို့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း များစွာ ကမ္ဘာပေါ် မှာရှိနေပါတယ်။
ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာပေးရရင်တော့ ဒီမိုကရေစီ ဘိုးအေကြီးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ယောက္ခမများ၊ သားများ အခြေပြု နေထိုင်တဲ့ အင်္ဂလန်တိုင်းပြည် (ဗြိတိန်နိုင်ငံ) ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သတ်မှတ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းနဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး။ ဗြိတိန်အထက်လွှတ်တော်မှာ ၃၃ % သော လွှတ်တော်အမတ်များ (၉၂) ဦးဟာ မင်းဆွေ မင်းမျိုးများရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် (House of Lords) အဖြစ် ရွေးကောက် ခံစရာမလိုပဲ အဖိုးသေရင်အဖေ၊ အဖေ သေရင်သား အစဉ် အဆက် လွှတ်တော် နေရာရရှိ သူများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘုရင်မကြီးရဲ့ စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင် စနစ်ကို ကာကွယ်ဖို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံက ဥပဒေပြုပြီး ပြည်သူတွေ ရွေးကောက် ခံစရာမလိုပဲ လွှတ်တော် အမတ်အဖြစ် နေရာ ပေးထားခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တနည်း အားဖြင့် ဒီမိုကရေစီ မူများနဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိသော်လည်း တော်ဝင် မိသားစု အရေး ကိစ္စများအတွက် အထက် လွှတ်တော်မှာ ပြောရေးဆိုခွင့်၊ အကြံပြုခွင့် ရရှိအောင် သူ့နိုင်ငံ၊ သူ့လူမျိုး၊ သူတို့ရဲ့ အခြေအနေအရ ဖန်တီးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ တပ်မတော် သားများရဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခွင့် ပုဒ်မတွေကို ဒီမိုကရေစီ မူများနဲ့ မကိုက်ညီလို့ ပြင်ဆင်ချင်ရင် စံနမူနာအဖြစ် ယောက်က္ခမ တိုင်းပြည်မှာ ရွေးကောက် မခံဘဲ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူများ (House of Lords) များကို အရင် ကန့်ကွက်သင့်ပါတယ်။
အောက်စဖို့စ် တက္ကသိုလ်က နိုင်ငံရေး စိတ်ပညာနှင့် ဘောဂဗေဒ ဘွဲ့ရထားပေမဲ့ နိုင်ငံတကာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေများ လေ့လာမှု အားနည်းတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သိအောင် ရွေးကောက်ခံစရာ မလိုဘဲ လွှတ်တော်ထဲမှာ အမတ်မင်းများ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံများ ကို ပြောပြ ချင်ပါသေးတယ်။
- ဒီမိုကရေစီစံနှုန်း အမြင့်မားဆုံး နိုင်ငံတွေထဲမှာ ပါတဲ့ ကနေဒါ နိုင်ငံမှာ အထက်လွှတ်တော် အမတ် အားလုံးကို ဘုရင်ခံချုပ်က တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ပါတယ်။
- ချီလီမှာ အထက် လွှတ်တော် အမတ် ၄၈ နေရာ အနက် ၁၀ နေရာကို သမ္မတ ခန့်ပြီး သမ္မတ ဟောင်း မှန်သမျှ မသေမခြင်း ရာသတ်ပန် အမတ်ဖြစ် ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ မဲပေးစရာ မလိုပါဘူး။
- ကျွန်တော် တို့ရဲ့ အိမ်နိးချင်း ဒီမိုကရေစီ အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အန္ဒိယ အအထက် လွှတ်တော်မှာ သမ္မတခန့် အမတ် ၁၂ ဦး၊ အောက် လွှတ်တော်မှာ အင်္ဂလိပ်-အိန္ဒိယ ကပြား အမတ် ၂ ဦးတို့ဟာ ပြည်သူက ရွေးကောက်ပြီး ခန့်ထား သူများ မဟုတ်ပါဘူး။
- ကျွန်တော်တို့နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ် တူတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၅၀၀) အနက် တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ် ၃၈ ဦးကို တိုက်ရိုက် နေရာပေးထားခဲ့ပါတယ်။
- အလားတူ ဘာရိန်း၊ ဘူတန်၊ ဘရူနိုင်း၊ အီဂျစ်၊ ဖီဂျီ၊ ကမ်ဘီယာ၊ အိုင်ယာလန်၊ ဂျော်ဒန်၊ ကာကတ်စတန်၊ ကင်ညာ၊ ကီရီယာကီကျွန်းစု၊ မော်ရိုကို၊ နီပေါ၊ ရိုးမေးနီးယား၊ စပိန်၊ ဆူတန်၊ ယူဂန္ဓာ၊ တွန်ရိ၊ UAE၊ ဇင်ဘာဘွေ နိုင်ငံတွေရဲ့ လွှတ်တော် အသီးသီးမှာ ပြည်သူတွေက ရွေးကောက် တင်မြှောက် ထားခြင်းမပြုတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက အုပ်စိုးသူအဖြစ် သူတို့နိုင်ငံ၊ သူတို့လူမျိုး လိုအပ်ချက်အရ ရှိနေတယ်ဆိုတာ လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ယုံကြည် ထားတဲ့အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး အတွေ့ အကြုံနဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်များအရ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေးကာလမှ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုလုပ်မဲ့ တပ်မတော် သားကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်ထဲမှာ ရောက်ရှိနေတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတ်မှတ် ထားတဲ့၊ ခံယူထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနဲ့ မကိုက်ညီပေမဲ့လည်း ကမ္ဘာနိုင်ငံအများအပြားမှာ မဲဆန္ဒရှင်က မဲမပေးဘဲ လိုအပ်ချက်အရ ဥပဒေပြုအဖွဲ့မှာ အမတ်များပါဝင်နေတာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများရဲ့ လိုအပ်ချက် အရသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိလွှတ်တော်အခင်းအကျင်းနဲ့ လွှတ်တော်ရဲ့ ဆောင်ရွက် ချက်များအရ တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၄ ပုံ ၁ ပုံဟာ ဒီမိုကရေစီပုံစံအရ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၄ ပုံ ၃ ပုံကို မကျော်လွှားနိုင်တဲ့ အဆိုပြုချက်တွေ၊ ဆုံးဖြတ် ချက်တွေ မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလို တာက လွှတ်တော်မှာ တမက်သား ပါနေတဲ့ တပ်မတော် ကိုယ်စား လှယ်တွေရဲ့ မဲ အရေ အတွက်ဟာ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တွေရဲ့ ၇၅ % သော မဲ အရေ အတွက်ကို မလွှမ်းမိုး နိုင်ပါဘူး။
တိုင်းပြည်ေ ကာင်း ဖို့ အတွက် ဆိုရင်၊ ပြည်သူ့ အကျိုး စီးပွားကို ဖော်ဆောင် မယ်ဆိုရင်၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို မထိခိုက် ဘူးဆိုရင်၊ ရွေးကောက်ခံ အရပ်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ အဆိုတင်သွင်း မှုတွေကို တပ်မတော် သား ကိုယ်စားလှယ် များက အပြည့်အ၀ ထောက်ခံ အားပေးနေလို့ ရွေးကောက် မခံတဲ့ တပ်မတော် သားကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော် အတွင်း ရှိနေခြင်းဟာ ပြည်သူနဲ့ နိုင်ငံတော် အတွက် အကျိုး မယုတ်ဘူးဆိုတာ လက်ရှိ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်ကြီးများအသိ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း သိထား ရမဲ့ အချက် ကတော့ တပ်မတော်ဟာ အမျိုးသားရေး တာဝန် ထမ်းဆောင် တာဖြစ်လို့ ပါတီနိုင်ငံရေး ကို လုံးဝမလုပ်ပဲ ပြည်သူ့ အကျိုး စီးပွားတွေ ကိုသာ လွှတ်တော် အတွင်း တင်ပြ၊ ဆွေးနွေး၊ အကြံပြု၊ တိုက်တွန်း၊ တားမြစ် တာတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ပါတီစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ကင်းရှင်းစွာနဲ့ လွှတ်တော် အတွင်းက အခြေအတင် ကိစ္စရပ်တွေမှာ ထိန်းညှိပေးနိုင်မဲ့ အင်အားစု တစ်ရပ်အဖြစ်သာ ရပ်တည် နေတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်စေ ချင်ပါတယ်။
သိသာ ထင်ရှားတဲ့ အချက်ကတော့ ကြံခိုင်ရေး ပါတီက လွှတ်တော်အမတ်တွေ တင်သွင်းတဲ့ အဆိုတွေကို မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ရာမှာ ရှုံးနိမ့်မှုတွေ ရှိနေသလို တပ်မတော်သား ဗိုလ်ချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ သမ္မတ၊ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတို့ရဲ့ Policy Dialogue Platform မှာလည်း တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ကင်းကင်းနဲ့ ရပ်တည်နေတာ အထင် အရှားမြင်တွေ့ ရမှာဖြစ် ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေ ဒီလို အချိန်မှာ နိုင်ငံ တကာ လွှတ်တော် များမှာလည်း အလားတူရှိနေတဲ့ ရွေးကောက် ခံမဟုတ်တဲ့ လွှတ်တော် အမတ်များ ဖယ်ရှားရေးကို သူသတ်မှတ် ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းနဲ့မညီလို့ ဖယ်ရှားပစ်မဲ့ အကြံအစည်ဟာ လတ်တလောမှာမဖြစ်သင့်တဲ့ အခြေအနေပါ။ အဆိုးဆုံးကတော့ တမတ်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ပြည်သူရွေးကောက်ထားခြင်း မဟုတ်လို့ ဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတဲ့ တပ်မတော်ကို စိန်ခေါ်မှုဟာ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပင်ကို စရိုက်ပဲဖြစ် တယ်လို့ ယူဆ ရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်ကွယ်က နှောင်ကြိုးများကို မလွန်ဆန်နိုင်ခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အနေနဲ့ NLD ပါတီကို ရွေးကောက် ပွဲဝင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ် ထားပြီးဖြစ် တဲ့အတွက် NLD ပါတီဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေက ခွင့်ပြုထားတဲ့ စည်းမျဉ်းထဲက အတိုင်း လှုပ်ရှားရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုစဉ်က အကြီးအကျယ် No Vote လုပ်ခဲ့သူတွေက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မှာလည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အခုချိန် မှာတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တာ တွေမေ့ပြီး ကြားဖြတ် ရွေ့းကောက်ပွဲ ၀င်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကတော့ အမေရိ ကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် မြန်မာနိုင်ငံကို လာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းနဲ့ ကင်အဲရစ်လေး ယူဆောင်လာတဲ့ မိုက်ကယ် အဲရစ်ရဲ့ ဆွေတော် မျိုးတော် အပေါင်းက ပေးလာတဲ့ ဖိအား တွေကြောင့် မလွန် ဆန်နိုင် တဲ့ နှောင် ကြိုး တွေကြားမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လက်ခံ ခဲ့တယ် ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမှ လက်မခံရင် လည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လမ်းကြောင်းမှန် နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စဉ် မှာ ဘေးထိုင် ဘုပြော အဆင့် ရောက်မှာ ကို ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ကြိုသိ လို့ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါတောင် ယခု လာမဲ့ ရွေးကောက် ပွဲ မှာ သူ့ပါတီ အနိုင် မရရင် ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်း နဲ့မကိုက် ညီဘူးလို့ စွပ်စွဲ ဦးမှာ မြေကြီး လက်ခတ် မလွဲနိုင် ပါဘူး။
NLD ပါတီ အပါအ၀င် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လက်မခံပါဘူး၊ မကြိုက်ပါဘူး လို့ ပြောနေတဲ့ သူများ သိထားရမဲ့ အချက်က ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဟာ ပြည်သူ များက သဘော တူပါတယ် ဆိုပြီး ဆန္ဒမဲနဲ့ အတည်ပြု ထားတဲ့ ပဋိညာဍ် တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။
ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေ ဥပဒေရဲ့ ခွင့်ပြု ချက်အရ အရွေး ချယ်မခံတဲ့ တပ်မတော် သား ကိုယ်စား လှယ်တွေ လွှတ်တော် ထဲတမတ် သား ပါဝင် နေခြင်းဟာ ဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိသလို ဒီ ဥပဒေကို အတည်ပြုပေး ထားတဲ့ ပြည်သူ့ ဆန္ဒ လည်း ဖြစ်တယ် ဆိုတာ နားလည် သင့်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပြည်သူတွေက အတည်ပြု ထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ခွင့်ပြုချက် အရ တပ်မတော်ရဲ့ ရပ်တည်မှု အနေအထားကို ဖယ်ရှားရန် ကြိုးပမ်း လာမယ် ဆိုရင် တော့ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အဓိက အင်အားစုနဲ့ ထိပ်တိုက် တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ဆောင်နိုင် ရန် လွှတ်တော် အတွင်း နိုင်ငံရေး ပါတီများကို ထိန်းညှိမဲ့ (Check and Balance) ဆုံးရှုံး သွားမှာ ကို ပြည်သူ များက သတိပြု သင့်ကြောင်း အကြံပြုလိုပါတယ်။
ကျွန်မာဖေဖေ တည်ထောင် ခဲ့တဲ့ တပ်မတော် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ခဏခဏ သုံးပြီး ကျွန်မဖေဖေ ကွယ်လွန် ပြီးနောက် တည်ထောင် ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကို အတွင်း စိတ်မှာ အာဃာတ ရှိနေ လျှင် ယနေ့တပ်မတော်ကို လည်း အမြင် မကြည်ဖြစ် နေမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ် ကမွေးလို့ တပ်မိသားစု ၀င်ပါဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခံယူတယ်ဆိုရင် တပ်မတော်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ယုံကြည်ချက်တွေကိုလည်း တပ်မိသားစုပီပီ လိုက်နာ လုပ်ဆောင် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန် တကယ်တော့ ..
- နှစ်နှစ် သမီးအရွယ် ဖခင် ကွယ်လွန်ချိန် ကစပြီး စစ်တပ် နဲ့ကင်းကွာ ခဲ့ရတဲ့သူတစ်ဦး
- အပျိုဖော်ဝင်စ အရွယ်မှ စပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အနောက် ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ကြီးပြင်း လာခဲ့သူ တစ်ဦး
- ခယာန်ယာန် အသိုင်း အ၀န်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားတော်တွေ ကိုမေ့လျော့ပြီး အနောက်တိုင်း သွေးနှော ခံထားရ သူတစ်ဦး
- ၁၉၈၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ရောက် လာပြီး တပ်မတော်ကို အမြဲတမ်း ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် ခဲ့သူတစ်ဦး
- စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ထိန်းသိမ်း ခံထားရစဉ် ကာလများမှာ အနောက် မီဒီယာ မှိုင်းမိနေ သူတစ်ဦး က ပြည်သူလူထု အကျိုး စီးပွား အတွက် သူယုံကြည်တဲ့ ဒီမို ကရေ စီစံနှုန်းတွေနဲ့ အညီ တပ်မတော် ကို စည်းရုံးမယ် ဆိုတဲ့ စကားများ ဟာ ယုံကြည်နိုင်ဖွယ် ရာ မရှိသလို၊ ဗလောင်း ဗလဲနဲ့ အပြောင်း အလဲများပြီး တစ်နေရာ တစ်မျိုး ပြောတတ်တဲ့ စကားတွေကြောင့် အတ္တစိတ် လွန်ကဲပြီး နှောင်ကြိုးများ မိနေသူ တစ်ဦး အဖြစ်သာ တပ်မတော် သား များက သတ်မှတ် ထားပါကြောင်း သိစေ အပ်ပါတယ်။
http://www.myanmarexpress.net/2012/03/blog-post_9294.html မှ ကူးယူဖော်ပြပါကြောင်း
လက်နက်အများဆုံး တင်သွင်းသည့် အာရှနိုင်ငံများ
အာရှ ထိပ်တန်းအမျိုးသမီးများလို စောင့်လေမျိုးနွယ်ဆု...